Uyityala njani i-GIF: Isifundo esilula seNjani yokuTyalwa kwe-GIF | Creatives Online
Uninzi lwabayili abasebenza ngeefomathi zeGIF, Bayisebenzisa njengesixhobo kwimidiya yentengiso ye-intanethi. Kule meko, sithetha malunga nokuba iphepha lewebhu okanye ibhana linokuba yintoni.
Yintoni abambalwa abangayaziyo kukuba ukuchetywa kukwayinxalenye yokuhlelwa kwezi fomati. Kule posi, asiyi kukwazisa kuphela malunga nolwandiso kunye nefomathi yeGIF, kodwa kwakhona, Sikubonisa ngamanyathelo ambalwa alula, indlela yokunciphisa i-GIF.
Nangona kunjalo, siyakumema ukuba uhlale nathi kude kube sekupheleni kwaye ufumane imiba enomdla yale fomati.
1 Ulwandiso lweGIF
2 Iindlela ezahlukeneyo zokutsala i-GIF
2.1 KwiMac kunye neWindows
2.1.1 Inyathelo 1: Faka inkqubo kwaye ungenise i-GIF
2.1.2 Inyathelo 2: Nqampuna i-GIF kwaye uyigcine
2.3 Kwi Ezgif
2.4 Kwi-Adobe Photoshop
3 Ezona nkqubo zilungileyo
Kwabo kuni abangaqhelananga nefomathi ye-GIF, ichazwa njengesimbo sohlobo esinokudityaniswa nabanye njengePDF, JPG okanye ngokulula TIFF.
I-nomenclature yayo ithathwe kwi-"Ifomathi yoTshintsho lweMizobo ». Yintoni uphawu lwale fomati kukuba ivela kwi-bitmap ehambelana nemifanekiso ukuya kwi-8 bits nge-pixel nganye. Ulwandiso lwefayile ye.gif luqhele ukusetyenziswa njengomthombo wefomati yefayile kwiwebhu kwaye njenge sprites kwizicelo zesoftware.
Owona mgangatho wahlukileyo uphethwe ngu Ifomathi yefayile yeGIF kukuba isebenzisa indlela yokucinezela engalahlekiyo. Ngenxa yoko, akukho mpembelelo kumgangatho womfanekiso. Ngelixa ufaka iikhowudi kwizicelo zomdlalo, ifomathi yeGIF isetyenziswa kakhulu njengokugcina idatha yesprite enombala ophantsi.
Sinokufumana ii-GIFs kwiinethiwekhi ezininzi zentlalo kwaye banophawu olusisiseko lokusasaza ulwazi ngokukhawuleza, kunye neemvakalelo. Phakathi kwezinye izinto ezibonelelwa ngeeGIF zezi:
Inefomathi ekhaphukhaphu, evumela ukuba idlalwe kuso nasiphi na isixhobo.
Banomthamo ophezulu wokutsala ingqalelo kwaye bavumele ukuqonda okukhawulezayo nangaphandle komgudu wento abazama ukuyidlulisela.
Bavelisa udumo kunye nokuzibandakanya. Yindlela yokunxibelelana ngokukhawuleza kwingqikelelo kunye nokufikelela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Ziyifomati enesakhono esikhulu sokusasazeka kweentsholongwane.
Iindlela ezahlukeneyo zokutsala i-GIF
Kukho iindlela ezahlukeneyo okanye iindlela zokukwazi ukunqampuna i-GIF. Sichaza indlela yokwenza:
KwiMac kunye neWindows
IVidmore Video Converter edumileyo yinkqubo ebalaseleyo yedesktop eza nemisebenzi enamandla yokuhlela iiGIF, ukuguqula umxholo wemultimedia, kunye nokuphucula iividiyo. Iyakwazi ukunqampuna kwe-GIF apho unokwahlula i-GIF ibe ngamacandelo amaninzi. Ngale ndlela, unokuchonga ukuba yeyiphi indawo ofuna ukuyishiya kwi-GIF.
Ukuba into oyithandayo okanye onomdla kuyo kukuhombisa okanye ukuhlela i-GIF, ungayenza usebenzisa umsebenzi Hlela yesixhobo. Nantsi indlela yokwenza.
Inyathelo 1: Faka inkqubo kwaye ungenise i-GIF
Umthombo: Ukhuphelo lwePoPro
Ngaphambi kokuba uqale. kuya kufuneka ukufaka inkqubo, esiza kusebenza ngayo. Kufuneka uqale uyikhuphele kwaye uyifake kwiPC yakho. Nje ukuba uzifakile kwaye uzilungiselele, sebenzisa inkqubo kwaye uye kwithebhu ye Caja de herramientas kwaye ukhethe umenzi weGIF.
Emva kokuqala isoftware, ngenisa i-GIF ofuna ukuyisika okanye ukwahlulahlula. Kwaye xa sele unayo, cofa kuyo ividiyo kwi-GIF y gqiba ukuba yeyiphi i-GIF ofuna ukuyiqhuba.
Inyathelo 2: Nqampuna i-GIF kwaye uyigcine
Ukunqampuna i-GIF, cofa iqhosha Sika ukunciphisa i-GIF. Ukusuka kule festile, unokukhetha ukongeza amacandelo kwaye uchaze ubungakanani bexesha elahlukileyo. Okulandelayo, thatha isigqibo sokuba yeyiphi isakhelo ofuna ukusisika kwaye ucofe kwi Udoti kwipheyini yemboniso.
Sakuba sigqibile, cofa iqhosha Gcina ukusebenzisa utshintsho esilwenzileyo. Emva koku, ungenza ngokusesikweni ifomati yemveliso okanye uvule i-loop oopopayi. Ngoku seta indawo ekuyiwa kuyo ifayile uze ucinezele Yenza i-GIF kwaye ugcine isiphumo sokugqibela.
I-GIFS.com sisicelo esikwi-intanethi esikuvumela ukuba wenze ii-GIFs ngqo kwiphepha lewebhu. Unokuthatha ithuba lokutsala kunye nokulahla ujongano ngokufaka ifayile yakho kwisixhobo. Apho uya kufumana useto ezahlukeneyo ze-GIF onokufikelela kuzo njengokongeza izihlokwana, imifanekiso, ukucheba ividiyo, kunye nokunye okuninzi. Nangona kunjalo, usenokungakwazi ukunciphisa ubungakanani beGIF xa usebenzisa le nkqubo. Esi sixhobo singentla sisicelo esifanelekileyo sale mfuno ikhethekileyo. Ukufumanisa ukuba isebenza njani, sikubonisa isikhokelo esifutshane sesalathiso.
Inyathelo 1. Yiya kwiwebhusayithi esemthethweni yesixhobo, emva koko tsala kwaye ulahle i-GIF kwifolda yendawo ukuya kujongano lwesi sicelo se-intanethi.
Inyathelo 2. Kwicandelo elingasekhohlo, unokufikelela kwizixhobo ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso kwaye unokongeza ii-captions, izitikha, uhlengahlengiso lwezithuba, njl.
Inyathelo 3. Ukuqala inkqubo, ungatsala amanqaku okuqalisa kunye nesiphelo solawulo lokuqhokra. Emva koko nqakraza Yenza i-GIF ngasekunene phezulu kojongano. Le ndlela iyasebenza ukuba ufuna ukunciphisa ividiyo kwi-GIF.
Inyathelo 4. Okulandelayo, yongeza ulwazi oluyimfuneko GIF. Ungagcina nje imveliso ngokucofa i Khuphela okanye wabelane ngayo neeakhawunti zakho zemidiya yoluntu.
Nge-EZGIF, awunokwazi ukusika ii-GIF kuphela, kodwa uphinde wenze ubungakanani kwakhona be-GIFs ngokuthanda kwakho. Ke, ukuba eyona njongo yakho kukunciphisa ubungakanani beGIF yakho, ungajongi ngakumbi. Kwakhona, isixhobo sisebenza kuyo nayiphi na ibhrawuza yewebhu. Nakubasebenzisi besixhobo esiphathwayo, esi sixhobo sinokuba luncedo olukhulu. Ungayisebenzisa kwaye ufunde indlela yokunqampuna i-GIF kwi-iPhone kunye ne-Android njengoko ubuya kwenza ngesiqhelo kwiPC. Sikushiyela amanyathelo ekufuneka uwalandele:
Inyathelo 1. Vula isikhangeli oqhele ukusisebenzisa kwaye undwendwele iphepha elisemthethweni lesixhobo.
Inyathelo 2. Okulandelayo, cofa kukhetho Sika ukusuka kwimenyu kwaye iyakutsibela kwenye indawo yolawulo apho unokulayisha khona i-GIF. Cofa apha Khetha ifayile kwaye ulayishe ifayile yeGIF
Inyathelo 3. Emva kokulayisha, isixhobo siya kunika ulwazi malunga ne-GIF, ngokukodwa izakhelo kunye nobude bexesha elipheleleyo le-GIF. Khetha ukuba ufuna ukusika ngenombolo yesakhelo okanye ngexesha. Ukusuka Khetha umsiki wepaneli, cofa imenyu eyehlayo kwaye ukhethe ngokufanelekileyo.
Inyathelo 4. Ngoku khankanya iindawo zokuqala nezokugqibela ngokwendlela oyikhethileyo. Umzekelo, khawufane ucinge ukuba sikhethe ukutshala ngesakhelo kwaye sagqiba kwelokuba sinqande isakhelo se-10-16 Kwelinye icala, ungasebenzisa esi sixhobo sinye ukubonisa izakhono zakho zokucheba i-GIF kwaye usike iindawo ezingeyomfuneko.
Inyathelo le-5. Cofa kwiqhosha Ubude yokusikwa kwaye emva koko uskrolele ezantsi iphepha kwaye uya kubona umboniso weGIF. Ukukhuphela imveliso, nqakraza ngokulula Gcina iqhosha.
Ukuba ujonge isixhobo esiphucuke ngakumbi sokutyala i-GIF endaweni yeendlela eziqhelekileyo, i-Adobe Photoshop inokuzalisekisa iminqweno yakho emihle. Sisixhobo esaziwa ngesakhono saso sokuhlela ifoto. Ngaphandle koko, unokusebenzisa iPhotoshop ukutshala okanye ukusika ii-GIFs ngaphandle kobunzima. Ukuba ufuna ukuzoba iiGIF, esi sisixhobo esifanelekileyo saloo mfuno. Ukuyisebenzisa, sikushiya inyathelo ngenyathelo lokukukhokela.
Inyathelo 1. Ukuba sele unayo iPhotoshop efakwe kwiPC yakho, yiqhube kwaye ulayishe iGIF.
Inyathelo 2. Ukulayisha i-GIF kwisixhobo, yiya ku Ifayile> Vula Kamva kwaye ukhethe i-GIF kwi-hard drive yakho.
Inyathelo 3. Emva kokulayisha, kufuneka ubone zonke izakhelo kwi-Timeline window. Ukusuka apha, khetha izakhelo ofuna ukuzisusa kwaye ucofe inkunkuma kwimenyu engezantsi kwezakhelo.
Inyathelo 4. Phambi kokugcina umsebenzi wakho, ungajonga kuqala yonke i-GIF ngokucofa i Tap icon. Ngoku yiya kwiFayile> Thumela> Gcina kwiWebhu (Ilifa) kwaye Khetha i-GIF kwaye ekugqibeleni, cofa i Gcina iqhosha ukugqiba inkqubo.
Kwimeko apho awukacaci kakhulu malunga nokhetho onalo, sikushiyela icandelo lokugqibela apho unokwanelisa ezo mfuno kunye namathandabuzo onokuba nawo malunga noku.
Apha sikubonisa ezona nkqubo zilungileyo zokusika iiGIF.
I-Kapwing yenye yezona zinto zilula ukusebenzisa abahleli be-GIF kwi-intanethi, leyo inikeza inkonzo yokuhlela yasimahla yeevidiyo, ukuhlelwa kwemifanekiso, ukwenziwa kweememes, njl. Ungayinqampula i-gif ngeKapwing ngaphandle kwengxaki.
IiGifgifs zikunikeza oopopayi begif simahla abanetemplates ezininzi, kwaye idume nangokukwazi ukuhlela iiGIFs kunye nemifanekiso. Ukuba ufuna ukunqampuna i-GIF kwi-intanethi, ungayiphosi.
I-Iloveimg yaziwa kakhulu ngayo Ubuchule bokuhlela umfanekiso, kwaye umgangatho womfanekiso awuyi kutshintsha emva kokuhlela. Ke akukho mfuneko yakuba nexhala malunga nomgangatho we-GIF yakho emva kokuqhawula.
Njengoko ubonile, ukunqakraza i-GIF kulula kakhulu, landela nje amanyathelo esiwabonisileyo kwaye uzame iindlela ezahlukeneyo zokukhetha. Ukongeza, ukuba uyaqhubeka nokukhangela kunye nokuphanda, uya kuqonda amawaka ezixhobo ezikhoyo kwesi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyicupha njani i-GIF
Eyona arhente yoyilo edumileyo eSpain